Amazon: wada sheekaysigaaga waxaa dhageysanaya shaqaale u mahadnaqay Alexa - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Amazon: wada sheekeysigaaga waxaa kormeera shaqaalaha oo ka mahadcelinaya Alexa
Amazon: wada sheekaysigaaga waxaa kormeera shaqaalaha oo ka mahadcelinaya Alexa
Waa warbaahinta Bloomberg oo muujisay muujinta naxdinta leh. Shaqaalaha Amazon runtii dhagaystaan ​​sheekooyinka ka yimid isticmaalayaasha kaaliyaha caqliga leh Alexa.
Baaritaanka ka dib, Bloomberg ayaa kaliya shaaca ka qaaday warka weyn iyo naxdinta leh. Haa, shaqaalaha Amazon weyni waxay runtii dhagaystaan ​​sheekooyinka malaayiin qof oo adduunka ah. Xaqiiqdii, dadka qaarkiis xitaa waxay u heellan yihiin inay ciyaaraan oo ay ku qaataan saacadaha 9 maalintiiba si ay sidaas u sameeyaan.
Qarsoodinimada waa la jabsaday si loo hagaajiyo Alexa
Haddii qof kasta oo caadi ah uu ka fekerayo jilicsanaanta iyo ku xadgudubka asturnaanta, Amazon wuxuu isku difaacayaa isaga oo hubinaya in ciyaaradani ay yihiin kaliya ujeedada hagaajinta aqoonta iyo xirfadaha kaaliyaha codka. Sida laga soo xigtay shaqaale la waraystay by Bloomberg, ay shaqada waa in la caawiyo Alexa in "heli" jawaabaha saxda ah, isaga qudhiisuba wuxuu u sameeyey cayimista kaaliyaha in marka user a weydiiyo "Taylor Swift" isagu waa gabayaa.
Haddii Amazon hubiso in "Dhammaan macluumaadka waxaa lagu daaweeyaa sirta ugu sarraysa"waa macquul ah in macluumaadkani rafcaan u yahay isticmaalayaasha Alexa. Intaa waxaa dheer, xitaa haddii aan si cad loo qorneyn in wadahadalada ay dhageysan karaan shaqaalaha, waxaa si cad loogu qeexay xuduudaha sirta ah ee is-dhaafsiga dadka isticmaala la diiwaan geliyo, sida Le Figaro sharaxayso hagaajinta kaaliyaha wacyigalinta ...
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay taasi ku kalsoon tahay, ogow in Alexa uusan aheyn kaaliyaha kaliya ee kuu dhageysta ... Qaabka Google ayaa sidoo kale sameeya, sida Siri ee Apple. Sidaas soo jiido, waad dhageysantahay!
Maqaalkani waxa uu appeared first on: https: //www.gentside.com/news/amazon-les-employes-ecoutent-vos-conversations-grace-a-alexa_art90602.html
Facebook, WhatsApp iyo Instagram wali waa mid caalami ah!
Youtube: WACS. Manchester City-Tottenham: waxay ogaataa haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawir ahaan
Champions League: Barça-Liverpool iyo Tottenham-Ajax ayaa ku kulmay semi-finalka
Shilka dhimashada ee baska dalxiis ee Madeira
aan caadi ahayn9
Video dheeraad ah648